Ungayilanda kanjani futhi uyisebenzise kanjani i-Facourse ku-PC
NgoJuni 12, 2020 ngu Umhlahlandlela Wokuqondisa Shiya umbono
Sawubona FaceTime Lover! Ingabe udidekile ngokuphathelene nendlela ungafaka FaceTime e Iwindi yakho pc efana Isikhathi se-Windows 7, Isikhathi se-Windows 8, noma Ngisho uma ufuna ukulanda futhi ifake FaceTime ewindini lakho 10 uhlelo lokusebenza bese ulandela lesi sihloko?
download FaceTime ngoba pc
FaceTime amawindi pc 10
FaceTime amawindi 7 laptop
ungakwazi FaceTime kukhompyutha
FaceTime ngoba pc download
Lapha kulesi sihloko, Ngimniké amanye amathiphu alula namasu esizovumela ukuba usebenzise ozithandayo lokusebenza FaceTime yakho ukuze imisebenzi emsamo iwindi.
Uma usebenzisa iwindi laptop futhi bafuna thwebula FaceTime amawindi 7 laptop khona-ke yilowo nakho konke ehlanganiswa kulesi sihloko nje ulandele inqubo elula onikelwa ngezansi.
FaceTime Apple Inc. ingenye interactive kakhulu, ewusizo, kanye nesoftware ye-videotelephony yokugcina enomthelela emhlabeni wonke. Kulomkhakha wekuvuselela digital, wonke umuntu ufuna ukuhlala axhunyiwe emphakathini nabanye.
Ngosizo Face isikhathi, ungakwazi kuyathakazelisa ukukwenza kokubili ividyo ne-odiyo ubiza ukuhlala eline okuyo. Nge kwesikhathi, ukusetshenziswa lokusebenza FaceTime uye kakhulu kwandile phakathi Apple abasebenzisi.
Lolu hlelo lokusebenza yokuncintisana kwabanye njengoba kuvumela oqhuba kakhulu eliphezulu video kanye alalelwayo izingcingo. Ngokwe ucwaningo, abantu abaningi ukuba Apple kuhlanganise ne-iPad, iPhone, Mac, kanye ne-iPod usebenzisa FaceTime ukuze uhlale uxhumene umhlaba wabo siqu futhi corporate.
ekuqaleni, Ubuso Isikhathi sasibizwa kuphela eyenzelwe Apple. Kodwa ngenxa ukusebenza yayo esebenza kahle futhi funa, manje ungase futhi ukulanda FaceTime ye-PC. Ingabe akukhona lokho ezithakazelisayo? Indlela yokuxhumana siye sashintsha ngokuphelele manje.
Abantu uthanda ukwenza okwengeziwe ividyo ne-odiyo izingcingo kunokuba e-mail noma Amameyili. Ngosizo lensiza okuhlakaniphile Iqiniso Isikhathi, ungakwazi kalula ukukhuluma nomuntu ehlezi kuphi emhlabeni wonke.
Kwamanye amazwe afana US nase-UK, abantu abaningi basebenzisa Apple okwenza kube wusizo ukuba siyohlala sixhumene nabanye Apple abasebenzisi.
Kodwa kwamanye amazwe, abathengi uncamela ukusebenzisa i-PC ukuze imisebenzi yabo yansuku zonke digital. Ngakho ukuletha kalula kubasebenzisi ezifana, lesi sihloko uyonihola kanjani kahle ukusebenzisa uhlelo lokusebenza iOS kumakhompyutha yakho siqu. Lokhu kwenza ukuba ukwazi uxhumane nabanye abantu abangekho usebenzisa Apple ezahlukene.
Ngakho uhlale ufunda lesi sihloko, uma ufuna ukulanda, ukufaka futhi ugijime uhlelo lokusebenza akunasisekelo ka Iqiniso Isikhathi sivuliwe yakho Amakhompuyutha omuntu siqu.
1 Download bese Ufaka FaceTime App For PC:
2 Indlela Download bese Ufaka FaceTime ye-PC?
2.2 Izici FaceTime App ku-PC yakho:
2.3 Okuningi kusuka kusayithi lami
Download bese Ufaka FaceTime App For PC:
ngokuvamile, Apple has uhlelo lokusebenza-eyakhiwe FaceTime kuwo wonke amadivayisi kuhlanganise iPhone, ngomakhalekhukhwini nama-iPod, iPads, ne-Mac. Kodwa awukwazi ukuthola le ndlela ku-PC yakho. Ngenxa yale njongo, kufanele ufake i-Face Time ngokusebenzisa Emulator. Le nqubo ukulandwa buhlanganisa izinyathelo ezilandelayo:
Okokuqala, kumelwe ukulanda iPadain emulator. Ungaba ngokusebenzisa isixhumanisi inikezwe: ipadian.net
Landa i-PC yesikhathi esithile
Emva ukulanda Emulator iPadian, evulekile ifayela yayo futhi ufake ngokwenqubo izidingo enikeziwe imiyalelo.
Khona-ke, kanye Emulator yakho iPadian ifakiwe, manje ungakwazi ulivule bese Ngena ngemvume ngokunikeza ulwazi oludingekayo. Lesi sinyathelo udinga yakho Apple ID nephasiwedi.
Manje wena ungaba uhlelo lwakho FaceTime. Kodwa uma ungakwazi ukulithola ke ungakwazi kalula uyilande ngosizo uhlelo Apple App Store.
Okokugcina, faka singalokothi sithintane Apple emhlabeni ngokusebenzisa imeyili yayo, id yomsebenzisi noma inombolo futhi bazakhele umsindo noma amakholi wevidiyo. Ungenza lokhu ngokuchofoza isiqophi noma isithonjana ucingo ezinikezwe lokusebenza.
Indlela Download bese Ufaka FaceTime ye-PC?
Enye ukusebenzisa FaceTime ku-PC yakho ngokulandela izinyathelo ezilula ezimbalwa ngalendlela lelandzelako:
FaceTime ku-PC kungenzeka emva ukulanda BlueStacks ku yakho PC.
Ungalanda izinhlelo zokusebenza BlueStacks kusuka indawo esemthethweni bluestacks.com.
Ngemva ukulanda BlueStacks, Yifake futhi uma ukulanda sekuqedile, ukuqalisa phansi PC yakho.
Kuthatha imizuzu embalwa ukuqalisa ngemva kokuqala Bluestack izicelo. Musa ukuphoqa eduze, kungaholela ekonakaleni software.
Uma ukuqalisa phansi PC, evulekile BlueStacks isicelo ohlelweni lwakho.
Hamba kumenyu bese uchofoze play esitolo lokusebenza.
Ngemva kokuvula-Google Play Isitolo, Chofoza yosesho kanye nohlobo Facetime bese Download FaceTime amawindi pc.
Ukuze ufake FaceTime ngokushesha, chofa Vula Noma Run, bese ulandela imiyalelo esikrinini sakho. *Uma ucelwa iphasiwedi umphathi noma isiqinisekiso, thayipha iphasiwedi noma ukunikeza isiqinisekiso.
Ukuze ufake FaceTime kamuva, chofoza u-Londoloza, bese ukulanda ifayela ukufakwa kwikhompyutha yakho. Lapho usukulungele ukufaka FaceTime, qhafaza kabili ifayela, bese ulandela imiyalelo esikrinini sakho. *Lena kukho ephephile ngoba ungakwazi scan ifayela wokumiswa amagciwane ngaphambili kokuthi uqhubeke.
Qalisa FaceTime ku-PC yakho.
Indlela Yokusebenzisa Ethi Face Isikhathi sivuliwe Pc lakho?
Emva kokufaka lokusebenza oluthandayo Face Time ku-PC yakho, kufanele ulandele izisekelo izinyathelo ukuze uqale ukuyisebenzisa:
Ngemva nokufaka, uqalise uhlelo lokusebenza FaceTime. Ungenza lokhu ngokuchofoza kuphela ifolda yayo.
Uma lolu hlelo lokusebenza okokuqala, kufanele ufake i-imeyili yakho i-id nezinombolo zocingo. Lokhu kuyasiza ekwenzeni kube ID yakho engasetshenziswa abanye abasebenzisi ukuxhumana nawe. Uma usunayo i-ID, ungayisebenzisa kungenjalo ungenza entsha ngaphakathi imizuzwana embalwa
Ngemva inqubo yokungena ngemvume, uzothola navigation iphaneli ohlangothini kwesokunxele uhlelo lwakho FaceTime. Lokhu panel sibandakanya uhla amagama abo bonke abantu enihlangana ufuna ukuxhuma.
Thola umuntu ofuna ukuqala ingxoxo. Endabeni usebenzisa FaceTime ku-PC, ungakwazi kuphela uxhumane nanoma yimuphi umuntu uma wazi wabo we-imeyili.
Ngemva kwalokhu, kufanele ulinde session-dial-up.
Futhi-ke uma omunye umsebenzisi Anokubutha ucingo lwakho, konke sekulungile yokujabulela arcade isiqophi noma ikholi alalelwayo.
Emva kokuphothula ingxoxo yakho, ungakwazi vele uchofoze inkinobho Qeda ucingo ukumisa ucingo.
Izici FaceTime App ku-PC yakho:
Lokhu videotelephony lokusebenza emangalisayo kunezinzuzo eziningi futhi inikeza imiphumela oluvelele amakhasimende ayo. Ezinye izici zalo ezithakazelisayo:
High-Quality Call Isiqophi
Lolu hlelo lokusebenza kuphela yakhelwe ukwenza ikholi yevidiyo. Umqondo oyinhloko uwukwenza abantu ukuxhuma futhi wenze eduze ngosizo izicelo isiqophi kubo.
Le software yakhelwe ngokucophelela ukuze ungakwazi ukujabulela izinqumo eliphezulu namakholi wevidiyo. Izindaba ezinhle Face Isikhathi manje usekela 1080p ku Personal Ezamakhompiyutha.
Ukuze sijabulele le, uhlelo yakho kufanele e-eyakhelwe amakhamera. Futhi uma ungenayo ikhamera bese ungakwazi ukuthenga webcam.
I-Face Time inikeza esibanzi 16:9 izici. Lokhu kunikeza isithombe esihle Ukushayela kwezindlela nakho uma ufuna ukuba uxhumane nabanye abasebenzisi.
Ngenxa izinga nokuphumelela kwaleso sembatho, lensiza kubhekwa njengento engcono njengoba kuqhathaniswa izimbangi zayo kuhlanganise isithunywa, Skype, -Google Duo futhi abaningi abengeziwe.
Ikholi enhle alalelwayo:
Ngaphezu ophawulekayo ikholi yevidiyo sici, ungase futhi usebenzise okukhethwa kukho ucingo alalelwayo. It Ubuye ezinhle kakhulu izinga umsindo kungakhathalekile ibanga
Isithombe e Isithombe Isici:
Lokhu kukusiza ukuba ubukeke kangcono ngokubonisa isithombe sakho encane ohlangothini ngenkathi ematasa ucingo lwakho.
Umsebenzisi- isikhombikubona enobungane
Enye inzuzo yokuncintisana ka FaceTime ku-PC yakho, ke ine interface yomsebenzisi-friendly ngimthande. Kuyinto elula kangaka, bushelelezi, futhi kulula. Noma ubani angasebenzisa futhi balithole ngokufanele kakhulu. Lesi ngiso sizatfu sekufa ukuthi abasebenzisi kakhulu kukhona ngokuphelele uthando lokusebenza FaceTime Apple.
Ukuze ubumfihlo nokuphepha kwakho, ungakwazi ukuvimbela noma yimaphi contact. Uma umuntu nokuyidlalisa noma abakucasulayo, konke onakho ukwenze ukuvimba lowo muntu ngokufaka igama lakhe block-uhlu
Ngaphezu kwalokhu, Ubuso Isikhathi inikeza nezinye izici ezikhangayo
• Ungakwazi kalula ukufinyelela contact yakho wayefisa nje usebenzisa Apple ID noma inombolo yocingo yabo.
• Ungase uphuze ucingo iqembu ngokusebenzisa FaceTime. Ngokuthakazelisayo, lolu hlelo lokusebenza ikuvumela ukuba baxhumane kuze kufinyelele 32 abasebenzisi ndawonye
• Ukuze ujabule futhi ingxoxo interactive, ungasebenzisa izitikha Animoji
• Phakathi namakholi wevidiyo, ungasebenzisa amakhamera yakho ngezindlela ezimbili
Ungakubonisa ubuso bakho ngokusebenzisa ikhamera ye-PC noma
Ungasebenzisa yekhamera ukuze wazise abangani bakho ukubona ukuthi ubukele
• Ukuze uthole uxhumene nabantu obathandayo ngokushesha, ungenza uhlu lwakho Izintandokazi.
• Ungase uphuze Face Time ngokunye kwalokhu Wi-Fi noma idatha yakho yokuxhumana
• Ungasebenzisa lolu hlelo lokusebenza ngezilimi ezahlukene kuye izintandokazi zakho
Ngithemba ukuthi lesi sihloko kuye kwagcwaliseka yonke imininingwane udinga ukusebenzisa FaceTime ku-PC yakho. Uma unemibuzo, musa ukusho ebhokisini amazwana. I will answer your question and resolve your queries.
Ungayilanda kanjani i-FaceTime yeWindows
Thwebula & Sebenzisa i-Facourse kwikhompyutha
Indlela Elula Yokulanda Nokufaka Isikhathi Esikhathini ku-i-Pad
Indlela elula yokusebenzisa i-FaceTime ku-Apple Watch
Bheka Ukuqhathanisa kwe-Skype nokuqhathanisa okuyisikhathi 2020
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime
Indlela Yokusebenzisa Apple Buka Ngaphandle Iyamatanisa iPhone
Imininingwane © 2020 · Magazine Pro ku Genesise Framework · WordPress · Ngena ngemvume
Kudingekile Kuvunyelwe Njalo